Fankahalàna Arabo, Fa Tsy ‘Ahiahy Noho Ny Fisianà Baomba’ No Nanafoanana Ilay Sidina Madrid-Berlin Hoy Ny Mpandeha Iray · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraAlejandro Salamanca Rodríguez
Voadika ny 10 Febroary 2017 6:47 GMT
Fiaramanidina Iberia Express iray. Sary an'i Eric Salard avy amin'ny Flickr. CC BY-SA 2.0
Nofoanana ny sidina IBS 3674-n'ny Iberia Express avy any Madrid ho any Berlin, tamin'ny 10 Janoary 2017. “Ahiahy noho ny fisianà baomba” no antony ôfisialy nambaran'ny ENAIRE, mpitantana ny fifamoivoizana an'habakabaka Espaniola. Navoaka daholo ny mpandeha ary nataon'ny mpitandro filaminana, izay nanao sava hao ilay fiaramanidina mba hikarohana ilay baomba, fanadihadiana ilay “nahiahiana”.
Nofoanana noho ny ahiahy fisianà baomba ny sidina IBS 3674-n'ny Iberia Express, mampitohy an'i Madrid/Barajas amin'i Berlin.
Tsy marim-pototra ilay loza, nibitsika ny ENAIRE tato aoriana, ary maro amin'ireo haino aman-jery Espaniola mpanome vaovao no nanaparitaka ny vaovao navoakan'ny masoivohom-baovao EFE sy ny Europa Press izay namerina indray ny fitantaràna ôfisialin’ ilay “ahiahy tsy mitombina mikasika fisianà baomba .” Mitantara tantara mitovy amin'izany ny Spanish News Today (Vaovaon'i Espaina Androany), gazety miteny anglisy amin'ny aterineto.
Tsy milaza amin'ny antsipirihiny ny tena zava-nisy marina ireo lahatsoratra ireo, na dia izany aza. Nisy mpandeha iray tamin'io IBS 3674 io nitantara tamin'ny mpanoratra ato amin'ny Global Voices ny zavatra hitany, izay samy hafa amin'ny “ahiahy tsy mitombina mombanà fisianà baomba ” nohazavain'ireo manampahefana. Araka ny nambaran'ilay vavolombelona nanatri-maso, izay nifidy ny tsy hitonona anarana, dia nisy mpandeha iray miteny alemà nanapaka ny fampianaran'ireo mpikarakara mpandeha ny fomba fiarovana sady nikiakiaka fa te-hiresaka amin'ny mpanamory izy satria misy ” mpandeha mpampihorohoro.”
Lehilahy libaney izay nampiasa finday anankiroa miaraka sady mandefa somaiso amin'ny teny Arabo ilay ahiana ho “mpandeha mpampihorohoro”. Naratra noho ny zava-niseho ilay mpandeha Libaney avy any Casablanca ho any Berlin sady nampiseho ny entana nentin-tànany : solosaina finday sy fitaovana fakantsary karazana reflex, hoy ilay vavolombelona. Na izany aza, tsy niainga ilay fiaramanidina vokatry ny fanizingizinan'ilay mpandeha saro-tahotra miteny alemà. Fa noho ny fitarainan'ireo mpandeha sasany, dia efa natomboka ny “fombafombam-piarovana” ary tsy azo najanona. Niditra tao anaty fiaramanidina ireo mpiahy ny sivily, mpitandro filaminana Espaniola nofanina ara-miaramila,ary nanomboka ny sava hao hikarohana ilay baomba, hoy hatrany ilay vavolombelona nanatri-maso. Nohadihadiany tao anaty efitra kely ilay “nahiahiana” ary nentiny avy eo.
Notakian'ireo mpandeha sasany ny hampidinana ilay mpandeha miteny alemà raha tsy izany dia mety ho toriana noho ny fanavakavahana ilay kaompania hoy ilay vavolombelona nanatri-maso. Nitsangana ny vehivavy Maraokana iray sady niteny fa tokony ho samborina ihany koa izy noho ny fisalorany sarondoha. Tena tsy nahatombina ilay mpiampanga, hoy ilay vavolombelona nanatri-maso, ka nentin'ireo mpiahy ny sivily. Ireo mpandeha sisa kosa tsy natahotra tamin'ilay ambana fampihorohoroana fa tezitra tamin'ilay zava-niseho, araka ny filazan'ilay vavolombelona nanatri-maso.
Fotoana fohy tato aoriana, nambaran'ilay lehiben'ny fanamoriana fa nofoanana ny sidina satria “misy olana vokatry ny fanoheran'ny mpandeha iray,” hoy ilay vavolombelona nanatri-maso, ary nafahan'ny mpiahy ny sivily tsy misy arakaraka, ilay mpandeha miteny alemà niampanga sy ilay mpandeha Libaney. Ireo mpandeha sisa kosa dia nomena sidina ny ampitso maraina, ary natory tamin'ireo trano fandraisam-bahiny maro akaiky ny seranam-piaramanidina.
Tsy vao voalohany izao no nisy sidina nofoanana noho ny rarin-tsaina amin'ny asa fampihorohoroana. Tamin'ny volana Aprily 2016, dia navoaka ny sidina Southwest Airlines tany Etazonia i Khairuldeen Makhzoomi, Irakiana mpianatra, rehefa nisy mpandeha iray nitaraina fa niresaka amin'ny teny arabo tamin'ny finday izy. Raha ny marina, dia efa im-betsaka nampangaina noho ny fanavahana ireo mpandeha avy any Afovoany Atsinanana sy Silamo ny Southwest Airlines.
Ary tamin'ny volana May 2016, dia nohadihadian'ny manampahefana i Guido Menzi, mpampianatra toekarena, rehefa nisy mpandeha iray nanaitra azy ireo momba ny marika mampiahiahy nosoratany tao anaty taratasy — ny marina dia namàha fampimiràna izy.